युरोकप : विश्व विजेता फ्रान्ससँग जर्मनी पराजित, रोनाल्डोको रेकर्णसहित पोर्चुगलको सुखद सुरुवात – Mission Khabar
#कोरोना परिक्षण शुल्क
#एकैदिन उच्च रेकर्ड
युरोकप : विश्व विजेता फ्रान्ससँग जर्मनी पराजित, रोनाल्डोको रेकर्णसहित पोर्चुगलको सुखद सुरुवात
मिसन खबर २ असार २०७८, बुधबार ०७:१५
एजेन्सी । साविक उपविजेता फ्रान्सले १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा जीतबाट सुखद सुरुवात गरेको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा जर्मनीलाई फ्रान्सले १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । जर्मनीको म्युनिखस्थित एलिनाज स्टेडियममा विश्व विजेता फ्रान्सले आत्मघाती गोलको मद्दतमा जित निकालेको हो ।
जर्मनीका माट हुमेल्सको आत्मघाती गोल नै फ्रान्सको जितका लागि निर्णायक बन्यो । डिफेन्डर हुमेल्सले २० औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेका थिए । फ्रान्सका लागि ६६ औं मिनेटमा केलियन एमबाप्पेले गोल गरेपनि अफसाइड भएपछि मान्यता पाएन । ८५ औं मिनेटमा एमबाप्पेको पासमा करिम बेन्जिमाले गोल गरेका थिए । तर, भीएआरको सहायतामा एमबाप्पे अफसाइड देखिएपछि गोलले मान्यता पाएन् । खेल अवधि भर बल पोसेसनमा पकड जमाएको जर्मनी फिनिसिङमा चुक्दा गोल गर्न सकेन ।
हारसँगै तीन पटकको च्याम्पियन जर्मनी युरोकपको इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो पहिलो खेलमा पराजित भएको छ । जितसँगै ग्रुप अफ डेथ मानिएको समूह ‘एफ’ मा रहेको फ्रान्स दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । यो समूहमा पोर्चुगल शीर्ष स्थानमा रहेको छ । जर्मनी तेस्रो र हंगेरी चौंथो स्थानमा छन्।
यता, मंगलबार रातीकै अर्को खेलमा साविक विजेता पोर्चुगलले विजयी सुरुवात गरेको छ । समूह चरणको पहिलो खेलमा हंगेरीलाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै पोर्चुगलले सुखद सुरुवात गरेको हो ।
पुस्कास एरिनामा पोर्चुगललाई जित दिलाउन कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दुई गोल र राफायल गुइरेरोले एक गोल गरे । खेलको ८४ औं मिनेटमा राफायलले गोल गर्दै पोर्चुगललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए भने ८७ औं मिनेटमा रोनाल्डोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै टिमको अग्रता दोब्बर गरे । खेलको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा रोनाल्डोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पोर्चुगललाई ३–० को जित दिलाएका थिए ।
रोनाल्डोले बनाए दुई विश्व रेकर्ड
हंगेरीविरुद्ध दुई गोल गरेसँगै रोनाल्डोले युरोकप फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन् । उनले युरोकपमा ११ गोल गर्दै फ्रान्सका मिचेल प्लाटिनीले बनाएको ९ गोलको कीर्तिमान तोडे । ३६ वर्षीया रोनाल्डोले पाँच संस्करणको युरोकप खेल्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान समेत बनाएका छन् । सन् २००४ बाट युरोकप खेलेका रोनाल्डोले २००८, २०१२ र २०१६ को संस्करण खेलेका थिए। २०१६ मा रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलले उपाधि जितेको थियो । रोनाल्डो लगातार पाँच संस्करणमा गोल गर्ने खेलाडी समेत बनेका छन् । जितसँगै समूह ुएफु मा रहेको पोर्चुगल ३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको हंगेरी पुछारमा रहेको छ ।
क्याटेगोरी : देश / प्रदेश
ओमिक्रोनलाई सामान्य र कमजोर नठान्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी !
कोरोना परिक्षणको शुल्क घट्यो, अब सरकारी अस्पतालमा ८०० मात्र, निजीमा…
उच्च रेकर्ड बनाउँदै थपिए ११ हजार ३५२ कोरोना संक्रमित, काठमाडौं…
एकैदिन उच्च रेकर्ड बनाउँदै थपिए १० हजार बढी संक्रमित, काठमाडौं…
मन्त्री आलेले नदेखेको ब्यथिति, मारवडी सेवा समितिको कब्जामा पशुपति धर्मशाला…
मन्त्री आलेले उठाए क्यासिनोको अधिकांश बख्यौँता, १३ करोड राजस्व छलेर…
१ओमिक्रोनलाई सामान्य र कमजोर नठान्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी !
२कोरोना परिक्षणको शुल्क घट्यो, अब सरकारी अस्पतालमा ८०० मात्र, निजीमा कति ?
३उच्च रेकर्ड बनाउँदै थपिए ११ हजार ३५२ कोरोना संक्रमित, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६३४३
४एकैदिन उच्च रेकर्ड बनाउँदै थपिए १० हजार बढी संक्रमित, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५५४९ जना
५मन्त्री आलेले नदेखेको ब्यथिति, मारवडी सेवा समितिको कब्जामा पशुपति धर्मशाला !